Umatshini wokutywina oomatshini oomatshini, abaxhasi - China oMatshini bokuTywina abaSebenzi
Isixhobo somatshini werabha esetyenziswa ikakhulu kwiikhabhathi noomatshini. Ezona zinto ziphambili kwimveliso zi-EPDM, i-PVC, irabha ye-nitrile, kunye nerabha yesilicone. Ubukhulu becala idlala indima yokulungisa, ukuvala isandi, ukungangeni manzi, ukungabi nalo uthuli, ubungqina bezinambuzane kunye nokutywina.
Umtya wokutywina yimveliso etywina uhlobo lwezinto kwaye yenze kungabi lula ukuyivula. Idlala indima ekufunyanisweni ngumothuko, ekungangeni manzi, kwisistim yokugquma, ukufudumeza ubushushu, ukuthintela uthuli, kwaye ikwanobuthathaka obukhulu, ubomi benkonzo ende, ukumelana nexabiso kukhuphiswano. Itywina lethu linokuhlangabezana nesicelo sakho sokuyila.
Inkampani yethu yamkela umgca wemveliso eqhubele phambili, sebenzisa izinto zokwenza izinto ezivela e-USA, eNetherlands, eKorea naseJamani, eyakhelwe ngokwahlukileyo irubber, ijolise ekunikezeleni umgangatho olungileyo, iimveliso zexabiso eliphantsi. Sizimisele ukusebenza nabahlobo abavela kwihlabathi liphela ukwenza ikamva eliqaqambileyo kunye.
Amatywina oomatshini aqukethe i-EPDM okanye ithambo le-PVC elithambileyo kunye nebhalbhu yesiponji ye-EPDM enezinto ezizodwa zentsimbi kunye nolwimi olubambekayo ukubamba ukubambelela okungcono, okusetyenziswa ikakhulu koomatshini, iimoto, iilori njalo njalo. zisetyenziselwa ukubonelela ngetywina kwindawo yokungena okanye ukuphuma kweshafti ejikelezayo. Ngexesha lokusebenza okuqhelekileyo umboniso obhityileyo wefilimu ukhona phakathi kobuso obujikelezayo kunye nobumileyo, umsebenzi wawo ekufuneka uthambise ubuso bokutywina kwaye ngaloo ndlela kuthintela ukuwoba okugqithisileyo.Izitywina zoMatshini zineempawu ezifanelekileyo, zinobungakanani obuninzi ukuze zilingane ngokuchanekileyo nangokugqwesileyo Iipropati zetywina